Document Controller | MaGa Manufacturing Co.,Ltd ﻿
Company: MaGa Manufacturing Co.,Ltd
•	Familiar with Excel ,Word and Power point.
•	English Language Skill
•	Must be 20 to 25 years old.
•	Experience Nil.
Work location အမှတ် (၁၀၄)၊၀က်မစွပ်ဝန်ထောက်လမ်း၊စက်မှုဇုန်(၄)၊လှိုင်သာယာ
•	အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
•	Concret ပိုင်းနှင့်ပတ်သတ်ပြီးစိတ်ပါဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။ •	Training ပြန်ပေးမည်ဖြစ်သဖြင့် အတွေ့အကြုံ မရှိသူများလည်းလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ •	ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။
Document Controller Admin, Secretarial & PA jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Ma Ga Manufacturing Co.,Ltd Admin, Secretarial & PA jobs Admin, Secretarial & PA jobs Document Controller Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Rakhine State 8 Days